गोल्डस्टार–पुस्तौंदेखिको एक सुनौलो पाइलाको सारथी ! - || वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक ||
गोल्डस्टार–पुस्तौंदेखिको एक सुनौलो पाइलाको सारथी !
२०७७ पुष ११, शनिबार १५:१४:००
सबैले सुनेको र देखेको सबैभन्दा चर्चित नाम हो–गोल्डस्टार जुत्ता। कुनै समय दुर्रदराजको गाँउ देखि शहरका रेडियोहरुमा विज्ञापन बज्थ्यो ‘हात्ती बलियो कि हात्तीछाप चप्पल बलियोरु’। विज्ञापनले जानगोल्डस्टार–पुस्तौंदेखिको एक सुनौलो पाइलाको सारथी !
सबैले सुनेको र देखेको सबैभन्दा चर्चित नाम हो–गोल्डस्टार जुत्ता। कुनै समय दुर्रदराजको गाँउ देखि शहरका रेडियोहरुमा विज्ञापन बज्थ्यो ‘हात्ती बलियो कि हात्तीछाप चप्पल बलियोरु’। विज्ञापनले जानकारी दिने हात्तीछाप चप्पलकै उपज मध्येको एक बन्न पुग्योे गोल्डस्टार जुत्ता।
हात्तीछाप बाट गोल्डस्टार जुत्तामा
गोलस्टार जुत्ता बन्नुभन्दा अगाडि २०२७ सालमा मोर्डन स्लिपर इन्डष्ट्रिज अन्तर्गत हेटौंडाबाट उत्पादन सुरू भएको हो हात्तीछाप चप्पल।
त्यतिबेला नेपाल र भारतको संयुक्त साझेदारीमा हात्तीछाप चप्पल निस्कने गर्दथ्यो। त्यतिबेलाका हिस्सेदार थिए नेपालकै राणा परिवारका नोरप्रताप जङ्ग राणा। उनकै नेतृत्वमा हेटौडाको हात्तीछाप चप्पल सञ्चालन आएको थियो।
हात्तीछाप चप्पल नोरप्रताप राणाले पहिलोपटक नेपाली बजारमा ल्याएका थिए । बजारमा ल्याएको त्यस चप्पलले एउटा ब्राण्ड बनाउनका लागि सफल भूमिका खेलेको प्रताप जङ्ग राणा बताउँछन् । नेपालको तत्कालीन अवस्थामा प्रजातन्त्रले भरर्खर, भर्रखर पाइला टेकेको अवस्था थियो । चप्पल लगाउने धनिमानीहरूका लागि थाइल्याण्डबाट आयात हुन्थ्यिो।
तर गरिब निमुखाका लागि खाली खुट्टामा डाँडाकाँडा विताउनेको संख्या ठुलो थियो। विस्तारै बजारमा हात्तीछाप चप्पलको ब्राण्ड यस्तो बन्यो कि रात तिन गुणा दिन चार गुणाले वृद्धि हुनथाल्यो । हात्तीछाप चप्पल नलगाउने मान्छे विरलै भेटिन थाले। पहिलोपटक नेपालमा प्रवेश गरेको हात्तीछाप चप्पलले नेपालमा प्रवेशगरेपछि निकै प्रशंशा बटुल्न सफल पनि भयो ।
उत्पादन सुरूगरेको केही वर्षपछि नोरप्रताप जङ्ग राणाको स्वर्गरोहण भएपछि भने विदेशमा पढ्दै गरेका छोरा नेपाल आएर अमिरप्रताप राणाले बुबाले समाल्दै आएको पेशालाई निरन्तरता दिन थाले । अमिरप्रताप राणाकाअनुसार भारतमा मोटामोटा खालका थाइल्यान्ड चप्पलहरू भनेर उत्पादन हुन्थियो । त्यहि थाइल्यान्ड चप्पललाई नेपालमा ल्याएर मोटाइको हिसाबले हात्तीजस्तै दरो र बलियोको हुनाले हात्तीछाप राखिएको राणा बताउँछन्। राण सम्झन्छन्, ‘सबैलाई फिटहुने खालको एकदम सजिलो र बलियोको रुपमा चिनियो हात्तीछाप चप्पल लगााउनु त हात्तीछाप भन्ने ट्रेन्डनै चल्यो’। हात्तीछाप चप्पलबाट राम्रो प्रतिक्रिया आएपछि जुत्ताको उत्पादनगर्ने सोच राणाले बनाए ।
नामै ब्रान्ड बन्न सफल भएको हात्तिछाप चप्पल उत्पादनमा इन्डष्ट्रिजले पाएको सफलतासँगै राणाले वि।सं।२०४७ बाट भने किरण सुज म्यानुफ्याक्चर्स कम्पनी अन्तर्गत काठमाडौंबाट अर्को ब्रान्ड नाममा गोल्डस्टार जुत्ता उत्पादन शुरु गरे। जुत्ता कम्पनी सुरूगरेको केही महिना नपुग्दै मेसिनमा समस्या आउन थाल्यो। विस्तारै गोल्डस्टार जुत्ता पनि एक सलह जस्तै बजार हिस्साबन्न थाल्दै थियो। २०५२ साल फागुनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी सशस्त्र द्धन्दतिर लागेपछि भने गोल्डस्टार जुत्तामा एउटा अर्को नसोचेको संकट आइलाग्यो ।
गोल्डस्टार जुत्ता सुरूका समयमा लोकप्रिय मानिन थालेको थियो । हरेक मानिसमा गोल्डस्टार जुत्ता लगाउनु सोख हुन्थ्यो । माओवादीले जनयुद्धको समयमा तिनै जुत्ताको भरपूर उपभोग गरे । राणा विगत सम्झदै भन्छन् ‘बलियो जुत्ता डाँडाकाडाँमा हिड्न किफायती भएकाले विद्रोही पक्षले गोल्डस्टार जुत्ता लगाउन थाले । यस्तो बन्यो कि जुनव्यक्तिले गोल्डस्टार जुत्ता लगाउथे पुलिसका आखाँले विद्राही देख्थे र समातेर लैजानेथे।’
प्रहरीले गोल्डस्टार जुत्ता लगाएको माथि कारवाहि गर्न थालेपछि धेरै मानिसले गोल्डस्टार लगाउन छाडे जस्लेगर्दा कम्पनीमाथि नकरात्मक असर पर्न थाल्यो । प्रहरी सेना र माओवादीको चेपुवामा गोल्डस्टारको बजार अनि चेपुवामा थिए राणा। तर जब कम्पनीलाई धरापपार्ने स्थिति आयो उनले कम्पनी बन्दगर्ने सोच नबनाएका होइनन् । तर बुवाले धानेको कम्पनीलाई लगानीको हिसाबले पनि बन्दगर्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले पनि उनी जुध्न सक्ने मनशाय बनाए। उनी भन्छन्, ‘गल्तीनगरीकन सजाय किन पाउने त्यसैले संघर्ष गर्न तयार भए र लडिरहे।’
जनयुद्धभरी गोल्डस्टारलाई खासै शान्ति हुन पाएन । विद्रोहीहरू कहिले चन्दा माग्न आउथे कहिले उद्योग नै बन्द गर्नका लागि दबाब दिन्थे पछिपछि भने उनका लागि भने यस्ता कुरा सामान्यझै लाग्न थालिसकेको थियो ।मजदुर आन्दोलनको वहानाबाजी कायम थियो । उत्पादन ठप्प । विस्तारै विद्रोहीहरु शान्तिपक्रियामा आएपछि भने केही शान्तिको महसुस हुन गालेको थियो । गोल्डस्टार पनि द्धन्दको धुवाँमा निसाएर बाहिर निस्कीएपछि भने उज्यालिदै जानथाल्यो। बजारलेपनि एकपछि अर्का सफलता हात पार्दै गए कम्पनीले युवापुस्ताको आकर्षण व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अगाडि बढ्न थाले ।
नेपालको मनमा बस्न सफल भएको गोल्डस्टार जुत्ता गुणस्तर, उत्कृष्ट डिजाइन र सरल मूल्यका कारण सबैले रुचाएको कम्पनीका बजार म्यानेजर उद्धव सिटौला बताउँछन् । गोल्डस्टारले जुत्ताको मार्केट मात्रै परिवर्तन गरेन गोल्डस्टारले स्वदेशी उत्पादनप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन गरिदिएको कतिपय व्यवसायी तथा उपभोक्ताहरु स्वीकार्छन् । तिनै सफलता र गुणस्तरका कारणले जसले विदेशमा समेत आफ्नो ब्रान्ड बनाउनका लागि सफल भयो ।
पुस्ता पुरानो होस् या नयाँ गोल्डस्टारले जोड्दै आजसम्म आइरहेको छ । अझै परिष्कृत अझै गुणस्तर र युवामैत्री बन्दै बजारमा आफ्नो राज राखेको छ । आक्रमक बजार रणनीति, उच्च व्यवस्थापन, उत्कृष्ट उत्पादनलाई उत्कृष्टताका साथ पस्कने शैलीकै कारण बजारको अग्रणी स्थान लिन सफल भएको छ ।सिटौला भन्छन्,‘नेपालीपनको झल्को, बुनोटका कारण धेरै नेपालीको रोजाइ बन्न सकेकाले नै गोल्डस्टार आजको अवस्था सम्ममा पनि प्रशंसनिय बन्नसफल छ’। हाल गोल्डस्टारले दैनिक ५५ हजार देखि ६० हजार पियर उत्पादन क्षमता बोकेको कम्पनीमाकारी दिने हात्तीछाप चप्पलकै उपज मध्येको एक बन्न पुग्योे गोल्डस्टार जुत्ता।
त्यतिबेला नेपाल र भारतको संयुक्त साझेदारीमा हात्तीछाप चप्पल निस्कने गर्दथ्यो। त्यतिबेलाका हिस्सेदार थिए नेपालकै राणा परिवारका नोरप्रताप जङ्ग राणा। उनकै नेतृत्वमा हेटौडाको हात्तीछाप चप्पल सञ्चालन आएको थियो। हात्तीछाप चप्पल नोरप्रताप राणाले पहिलोपटक नेपाली बजारमा ल्याएका थिए । बजारमा ल्याएको त्यस चप्पलले एउटा ब्राण्ड बनाउनका लागि सफल भूमिका खेलेको प्रताप जङ्ग राणा बताउँछन् । नेपालको तत्कालीन अवस्थामा प्रजातन्त्रले भरर्खर, भर्रखर पाइला टेकेको अवस्था थियो । चप्पल लगाउने धनिमानीहरूका लागि थाइल्याण्डबाट आयात हुन्थ्यिो।
उत्पादन सुरूगरेको केही वर्षपछि नोरप्रताप जङ्ग राणाको स्वर्गरोहण भएपछि भने विदेशमा पढ्दै गरेका छोरा नेपाल आएर अमिरप्रताप राणाले बुबाले समाल्दै आएको पेशालाई निरन्तरता दिन थाले । मिरप्रताप राणाकाअनुसार भारतमा मोटामोटा खालका थाइल्यान्ड चप्पलहरू भनेर उत्पादन हुन्थियो । त्यहि थाइल्यान्ड चप्पललाई नेपालमा ल्याएर मोटाइको हिसाबले हात्तीजस्तै दरो र बलियोको हुनाले हात्तीछाप राखिएको राणा बताउँछन्।
राण सम्झन्छन्, ‘सबैलाई फिटहुने खालको एकदम सजिलो र बलियोको रुपमा चिनियो हात्तीछाप चप्पल लगााउनु त हात्तीछाप भन्ने ट्रेन्डनै चल्यो’। हात्तीछाप चप्पलबाट राम्रो प्रतिक्रिया आएपछि जुत्ताको उत्पादनगर्ने सोच राणाले बनाए । नामै ब्रान्ड बन्न सफल भएको हात्तिछाप चप्पल उत्पादनमा इन्डष्ट्रिजले पाएको सफलतासँगै राणाले वि।सं।२०४७ बाट भने किरण सुज म्यानुफ्याक्चर्स कम्पनी अन्तर्गत काठमाडौंबाट अर्को ब्रान्ड नाममा गोल्डस्टार जुत्ता उत्पादन शुरु गरे। जुत्ता कम्पनी सुरूगरेको केही महिना नपुग्दै मेसिनमा समस्या आउन थाल्यो। अमिर भन्छन्,‘पहिलोपटक जुत्ता सुरूगरेको त्यो पनि मेसिनले काम गरेन,लगानी ठुलो थियो मन धेरै आत्तियो त्यतिबेला तर हरेस खाइन निरन्तर लागि रहे।’
विस्तारै गोल्डस्टार जुत्ता पनि एक सलह जस्तै बजार हिस्साबन्न थाल्दै थियो। २०५२ साल फागुनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी सशस्त्र द्धन्दतिर लागेपछि भने गोल्डस्टार जुत्तामा एउटा अर्को नसोचेको संकट आइलाग्यो । गोल्डस्टार जुत्ता सुरूका समयमा लोकप्रिय मानिन थालेको थियो । हरेक मानिसमा गोल्डस्टार जुत्ता लगाउनु सोख हुन्थ्यो । माओवादीले जनयुद्धको समयमा तिनै जुत्ताको भरपूर उपभोग गरे । राणा विगत सम्झदै भन्छन् ‘बलियो जुत्ता डाँडाकाडाँमा हिड्न किफायती भएकाले विद्रोही पक्षले गोल्डस्टार जुत्ता लगाउन थाले । यस्तो बन्यो कि जुनव्यक्तिले गोल्डस्टार जुत्ता लगाउथे पुलिसका आखाँले विद्राही देख्थे र समातेर लैजानेथे।’
जनयुद्धभरी गोल्डस्टारलाई खासै शान्ति हुन पाएन । विद्रोहीहरू कहिले चन्दा माग्न आउथे कहिले उद्योग नै बन्द गर्नका लागि दबाब दिन्थे पछिपछि भने उनका लागि भने यस्ता कुरा सामान्यझै लाग्न थालिसकेको थियो ।मजदुर आन्दोलनको वहानाबाजी कायम थियो । उत्पादन ठप्प । उनी भन्छन् ‘आन्दालोन भरी शान्ति आएन गोडस्टारलाई पनि।’ विस्तारै विद्रोहीहरु शान्तिपक्रियामा आएपछि भने केही शान्तिको महसुस हुन गालेको थियो । गोल्डस्टार पनि द्धन्दको धुवाँमा निसाएर बाहिर निस्कीएपछि भने उज्यालिदै जानथाल्यो। बजारलेपनि एकपछि अर्का सफलता हात पार्दै गए कम्पनीले युवापुस्ताको आकर्षण व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अगाडि बढ्न थाले ।
पुस्ता पुरानो होस् या नयाँ गोल्डस्टारले जोड्दै आजसम्म आइरहेको छ । अझै परिष्कृत अझै गुणस्तर र युवामैत्री बन्दै बजारमा आफ्नो राज राखेको छ । आक्रमक बजार रणनीति, उच्च व्यवस्थापन, उत्कृष्ट उत्पादनलाई उत्कृष्टताका साथ पस्कने शैलीकै कारण बजारको अग्रणी स्थान लिन सफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा : कार्यन्वयन नहुँदै सकिँदै
पुराना नोट पुनः विस्थापन गर्दै आरबिआई
सार्वजानिक शौचालयप्रति महानगरको वेवस्ता, कति छन् सार्वजनिक स...
चन्द्रागिरिको आईपीओ बाँडफाँट :१ लाख ३९ हजार ६०२ जनाले पाए स...
विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले आर्थिक सुधारको निरन्तरतामा नकार...